Indawo yakho eneenkwenkwezi eziyi-5 @Downtown: Umbono omhle + Pkg - I-Airbnb
Indawo yakho eneenkwenkwezi eziyi-5 @Downtown: Umbono omhle + Pkg
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguQader
Ngexesha lokuqhambuka kweCorona sithathe ithuba lokuyilungisa ngokupheleleyo indawo, ukuze ikhuseleke kwiindwendwe kunye nathi ukuba siqhubeke sisebenzisa le ndawo. Ngoku le ndawo yeyabucala, ukuze yonke indawo, kuquka igumbi lokuhlambela nendawo yokungena isetyenziswe ziindwendwe kuphela. Nangona isembindini wedolophu, iseyindawo ethe cwaka kakhulu kwaye ikufutshane nehlathi. Siye sawulungisa nomnyango wangaphambili, nto leyo enceda ukugcina igumbi libhetele.
Le ndawo icoceke kakhulu kwaye inikezelwe ngokupheleleyo kwiindwendwe. Sikwabonelela neendwendwe ngento yokubulala iintsholongwane, kwaye indawo iyabulawa iintsholongwane ngaphambi nasemva kokufika kondwendwe ngalunye. Ukongezelela, inegadi entle kunye netyeya entle. Ngaphandle koko, kukho indawo yokumisa ibhasi esitratweni apho iibhasi zidla ngokuya eSiegen ZOB (iibhasi ezimbini ngeyure).
Indawo yokuhlala inendawo yokungena eyahlukileyo kwaye iyakwazi ukungena ngqo egadini nakwindawo engaphantsi komhlaba. Ungasebenzisa igadi kunye netyeya, ukuba uyasazisa malunga nesicwangciso sakho sokusetyenziswa kwangaphambili.
4.76 · Izimvo eziyi-72
Abamelwane banobubele ibe bayaxhasa. Abamelwane banobubele ibe bayaxhasa. Nceda uhloniphe abamelwane bethu ngokungabi nangxolo kangako.
Umbuki zindwendwe ngu- Qader
Ndifumaneka ngefowuni okanye ngeSMS okanye ngokobuqu, nanini na xa ndifunwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Siegen